Haddii aad ka walwalsan tahay amniga, si ka fiican u iibso Android ka iPhone | Androidsis
Dhul kale oo ah halka ay Android kaga garaacdo Apple iphone-keeda. Markan waxay ku jirtaa sirta waana in xisaabta lagu darsadaa wax kasta oo la xiriira asturnaanta. Waana in baarayaasha dambi baarista ay sheeganayaan in telefoonada Android ay ka adag yihiin "jabsashada" ama "dildilaac" marka loo eego iPhones.
Xilli la ogyahay taas dawladda Mareykanku waxay awood u yeelatay inay sidii guriga oo kale uga gudubto sirta iPhone-ka, sida dhawaan looga dhawaaqay ku xigeenka. Laakiin waxay umuuqataa inay sii adkaaneyso in "la galo" telefoonada Android qaarkood. Tanina waa runta inaga dhigaysa mid ku faaneysa inaan taleefannadeenna ka dhigno kuwo qiimo badan.
1 IPhone wuu furan yahay
2 Iyadoo Android aad uga dhib badan tahay
IPhone wuu furan yahay
Waa Baare Rex Kiser, yaa wuxuu qaadaa baaritaanno dijital ah oo loogu talagalay Waaxda Booliska Fort Worth, oo sii adkeynaysa in sanad ka hor aysan "ku soo gali karin" iPhone-ka, laakiin ay ku geli karto dhamaan taleefannada Android.
Sida ay hadda u faraxsan tahay, hadda laguma dhex gelin karo mobilada badan ee Android. Sida laga soo xigtay cilmibaaris ay sameysay Vice, Cellebrite, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan wakaaladaha dowladda marka ay timaaddo "dildilaaca" taleefannada casriga ah, waxay leedahay qalab awood u leh inuu albaabada u furo iphone kasta oo la soo saaray, xitaa iPhone X.
La qalab ayaa mas'uul ka ah ururinta xogta sida diiwaanka GPS, fariimaha, taariikhda wicitaanka, xiriirada iyo xitaa xog gaar ah oo laga helo barnaamijyada sida Twitter, LinkedIn ama Instagram. Iyada oo ay macluumaadkan oo dhan gacanta ku hayaan way u fududdahay inay raacaan xaqiiqooyinka dambiyada iyo kuwa aan ahayn marka ay shirkaddu u baahan karto xogta macmiilka ama macluumaadkaas qarsoodiga ah; Annagu dooni mayno inaan quduusiin noqonno sidoo kale waa waxa ay tahay.
Iyadoo Android aad uga dhib badan tahay
Isla taas Qalabka Cellebrite ee loo adeegsado sirta Android aad ayey uga guul yar tahay boosteejooyinka sumcadda leh. Waxaan ka hadlaynaa dhamaadka sare. Baaraha wuxuu dhigayaa, tusaale ahaan, sida aaladaha ay ka mid yihiin Google Pixel 2 ama isla Samsung Galaxy S9, aaladdu xitaa kama soo saari karin xogta shabakadaha bulshada, taariikhda baalashada biraawsarka ama kuwa la xiriira GPS. Haddii aan u tagno Huawei P20 Pro, waxaa la dhihi karaa ma awoodin inay soo saarto wax xog ah.
Baaraha laftiisa ayaa cadeeyay in cusbooneysiinta cusub ee Android way ka "adkaysi badan tahay" markay tahay inay iska difaacaan weeraradan si xog looga soo saaro moobilada ay ku rakiban yihiin. Tani waxay si cad u cadaynaysaa sida shirkaduhu wax u wadaan si markaa hay'adaha dawladu ay ugu adkaato "inay dhex galaan" telefoonadaas inay soo saaraan waxay doonayaan. Marka arimaha gaarka ah ayaa si dhab ah loogu qaadanayaa shirkadaha sida Huawei iyo Samsung.
Waa in la sheegaa in kastoo aan yeelano mid ka mid ah taleefannadii ugu dambeeyay ee AndroidWaa in la caddeeyaa in aysan micnaheedu ahayn in ay gebi ahaanba ammaan tahay in laga fogaado in ay "dillaacaan" qalabkan. Sababtoo ah Cellebrite's shaqadiisa ma ahan micnaheedu maahan in cilmi baarayaashu aysan soo saari karin xogta ay u baahan yihiin. Kaliya in hawshu ay noqon karto mid aad u hawl badan oo qaadanaysa waqti iyo dhaqaale badan. Waxaanan horeyba u ognahay inay tani macnaheedu tahay kordhin sare oo loogu talagalay qofka shaqaaleeya adeegyada iyo kan bixiya labadaba.
Waxa cad waa taas hadda dusha sare ee kala duwanaanta Android ayaa aad uga ammaan badan beddelka kaas oo la socon kara iPhone. Haddii aad ka walwalsan tahay amniga, horeyba waad u ogtahay halka aad aadeyso, u aad aaladda sare ee Android oo dhex mar khadadkaan si aad ula socoto wax walba oo ku saabsan nidaamka hawlgalka ugu rakiban adduunka. Waxa aan kugula talineyno waa in moobaylkaaga lagu cusbooneysiiyo waxyaabaha ugu dambeeya ee amniga ah sida waxay ku dhacdaa Realme.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Baadhitaanka danbiga ayaa sheeganaya Qarsoodiga Android wuu ka fiican yahay hadda iPhone
The "Battle Chess"-ka ugu fiican sanadka waa halkaan: Might & Magic Chess Royale oo ay la ciyaarayaan 100 ciyaartoy